प्रश्न १) माथेमा आयोगको प्रतिवेदन के हो?
उत्तर: सर्वप्रथम त उक्त रिपोर्ट राम्रोसँग अध्ययन गर्न बिनम्र अनुरोध छ । माथेमा प्रतिवेदन उच्चस्तरीय आयोगले बनाएको रिपोर्ट हो । राजनीतिक गन्ध नआउने विज्ञहरू सम्मिलित समूहको अथक मेहनत, अध्ययन अनि धेरै कुराहरुको विश्लेषणपछि निस्केको निष्कर्ष हो ।
प्रश्न २) यो प्रतिवेदनले जे भन्यो त्यो गर्नैपर्छ र ?
उत्तर : यसले जे भन्यो त्यही गर्नैपर्छ भन्दा पनि यतिका विज्ञहरूले भनेको नगरेर कस भनेको गर्ने भन्ने प्रश्न यक्ष हो । चुनाव जितें भन्दैमा वा मन्त्री भएँ भन्दैमा वा दुई तिहाई ल्याएँ भन्दैमा मैले जे भन्यो त्यो हुनुपर्छ भन्नु पो वैज्ञानिक हुँदैन त ।
प्रश्न ३) संबिधान त अपरिवर्तनीय छैन भने जाबो एउटा प्रतिवेदन परिवर्तन गर्न किन नहुने ?
उत्तर: हो यो प्रतिवेदन पनि अपरिवर्तनीय वा अकाट्य छैन तर दुई तिहाइको सरकारले यसरी भने पो सबैलाई मान्य हुन्छ होला नि : राजनीतीको गन्ध नआउने निम्न विज्ञहरूको समूहले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी उक्त प्रतिवेदनमा निम्न बूँदाहरू निम्न कारणले गलत वा समय सान्दर्भिक नदेखिएकोले परिवर्तन गर्नुपर्ने राय दिएकोले सरकारले परिवर्तन गरेको छ । यदि यसरी भन्ने हो भने त सरकारको हाइहाइ होला नि हैन र?
प्रश्न ४) सडकबाट जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने? एक ब्यक्तिले जे भन्यो त्यही हुने हो? संसदको अवमुल्यन भएन र ?!
उत्तर: जनताले आफ्नो कुरा जहाँबाट पनि राख्न सक्छन्। लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही त हो । शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना कुराहरु राख्दा संसदको अवमूल्यन हुँदैन । बरू सडकबाट उठेका सही कुराहरुको सम्बोधन गरेर संसदले आफ्नो गरिमा उच्च राख्ने अवसर प्राप्त गर्दछ । अहिले गोवीन्द केसीका मागहरू कुनै पनि व्यक्तिगत छैन र यो कुनै एक व्यक्तिको माग पनि होइन । बरू कम्युनिस्ट विचारधारासँग नजिक दृष्टिकोणलार्इ आफ्नो माग बनाइदिएकोमा जतिसक्दो छिटो पूरा गरेर जनपक्षीय सरकारका रुपमा देखिने उपयुक्त अवसर पनि हो।
प्रश्न ५) गोविन्द केसीलाई विवेकशील र कांग्रेसले बोकेका छन्। यो राजनीतिकरण होइन ?
उत्तर: गोविन्द केसीका समर्थक हरेक पार्टीमा छन्। हरेक पार्टीको सरकारमा उनी अनसन बसेका छन्। उनको मागका समर्थन गर्न कुनै पार्टी नै हुनु जरूरी छैन । बरू पार्टीले उनका मागहरूलाई अङ्गिकार गरे पार्टीलाई फाइदा निश्चय छ । दु:खका साथ भन्नुपर्छ, सरकारमा नहुँदासाथ उनका माग मन हृदयबाटै आत्मसाग गर्छन् हरेक पार्टीले अनि सरकारमा पुग्नासाथ यू टर्न हुन्छन्। अहिले भएको त्यही हो । गोविन्द केसीले राजनीती गर्नु जरूरी नै छैन । कसैले बोक्नु पनि पर्दैन । बरू उनको नाममा कसैले तुच्छ राजनीति नगरे देशको भलाई हुन्छ।
प्रश्न ६) त्यसो भए अहिलेको समाधान के त ?
उत्तर गोविन्द केसीले उठएका केही माग स्वत: पूरा हुने देखिन्छ। उठाइएका मागमध्ये मुख्य माग भनेकै माथेमा प्रतिवेदन लागू गर्ने हो र जब एक पूर्ण अधिकार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्दछ। धेरैजसो समस्याहरू यसले समाधान गर्दै जानेछ र एउटा थिती बस्ने छ । र, आउँदा केही वर्षहरूमा चिकित्सा क्षेत्र तपाईं हामीले सोचेको जस्तो होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।
प्रश्न ७) उसोभए किन समाधान ननिस्केको त ?
उत्तर : दुई तिहाईको दम्भ र हठले गर्दा आफ्नै माग सरकारले लत्याइरहेको छ । विपक्षीलाई आन्दोलन गर्ने बहाना दिएर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्दै छ। भर्खरै चुनावमा प्राप्त जनसमर्थन र सदभाव बिस्तारै तुहाउँदै छ । र, यो अस्थिरता जति लम्बियो त्यती देशलाई र सरकारलार्इ नोक्सान पुग्छ ।